त्यसैले, ईस्टर को उज्यालो छुट्टी आउँदै। यो दिन परंपरागत प्रत्येक अन्य रंग अन्डा दिन स्वीकार छ - Krashenki। र कसरी के तपाईं तिनीहरूलाई रंग? अन्डा लागि मात्र प्राकृतिक रंजक प्रयोग गर्नुहोस् - यो आफ्नो प्रियजनलाई को स्वास्थ्य को लागि सजिलो र सुरक्षित छ। र अरू के ध्यान गर्नुपर्छ? यो हाम्रो लेखमा छलफल गरिनेछ।
नियम र रंगाई अन्डा लागि विधिहरू
ड्राई रासायनिक रङहरू एप्लिकेसनमा सामान्यतया राम्ररी तिनीहरूलाई अन्डा फोडा गर्न आवश्यक छ, तपाईं बस ठाँउ तयार-तयार आवश्यक समय धान्न अनुसार निर्देशन र समाधान संग।
त्यहाँ अर्को विधि जसमा कृत्रिम मसी तरल स्थिरता छ। यस मामला मा, एक उसिनेर अन्डा गंदा चित्रकला संरचना र राम्रो ड्राई सम्म rubbed।
तपाईं अन्डा लागि प्राकृतिक रंजक, केही अन्य प्रविधि प्रयोग गर्नुहुन्छ भने। पहिलो, शोरबा तयार, त्यसपछि उहाँले एक समय को लागि जिद्दी, र त्यसपछि यो Krashenki उसिनेर।
काम, केही चाल विचार:
- पकाउने अघि अन्डा कोठा तापमान मा केही समय भिजेको। तिनीहरूले खाना पकाउने समयमा फुट्छ छैन भन्ने सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ;
- द खोल कुनै पनि क्षति बिना, सम्पूर्ण हुनुपर्छ;
- पूर्व-धुने र तयार अन्डा सूखी;
- पकाउने समय 10 मिनेट भन्दा बढी हुँदैन, अन्यथा उत्पादन स्वाद नभएको हुनेछ;
- एक बनाउन तरकारी गहने को खोल सुन्दर पात संलग्न र तिनीहरूलाई र्याप Capron खाना पकाउने अघि अन्डा र ढाँचाको;
- तिनीहरूलाई चमक बनाउन समाप्त अलिकति न्यानो Krashenki वनस्पति तेल हटाउन।
अन्डा लागि सबैभन्दा लोकप्रिय प्राकृतिक रंजक
चित्रकारी ईस्टर अन्डा फल, तरकारी, जडीबुटी, रूख छाल - मात्र प्राकृतिक कच्चा माल प्रयोग पुरानो दिनमा। र हाम्रो समय मा, अन्डा लागि यस्तो रंजक धेरै लोकप्रिय, स्वास्थ्य को लागि हानिरहित (रासायनिक पाउडर गर्न विरोध रूपमा) हो जस्तो छ। सबै भन्दा अधिक प्रयोग:
प्याज बोक्रा। रंगाई लागि प्रयोग सामाग्री को राशि निर्भर रंग krashenok हल्का पहेंलो वा गाढा खैरो गर्न सक्नुहुन्छ।
चुकंदर रस। यो अन्डा गुलाबी र बुरगुण्डी रंग दिन्छ। अन्डा रङ लगाउन लागि, grated सोडियम बीट को समाधान तयार पानी संग कवर र 20-30 मिनेट जोश। परिणामस्वरूप तनावपूर्ण शोरबा मा सिरका र एक सानो नुन को केही चमचा थप्न त्यसपछि अन्डा राख्न र 5-10 मिनेट पकाउन। सुन्दर सम्म बस्न गरौं।
पालुङ्गो। अण्डा एक पूर्व-तयार समाधान मा खाना पकाउन यदि उज्ज्वल हरियो रंग प्राप्त छ। यो गर्न, कटा पालुङ्गो 30-40 मिनेट जोश।
बर्च छोडेर। पहेँलो krashenok प्राप्त गर्न तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस्। पातहरु मात्र लिएको सकिँदैन ताजा, तर पनि सुकेको। को उम्लिरहेको पानी, जोश पोख्नुहोस् र यसलाई अझ Saturated रंग लागि बनाउँने गरौं। त्यसपछि चित्रकला लागि तयार अन्डा, 10 मिनेट लागि उम्लिरहेको र जोश पछि न्यानो समाधान मा डूबा गर्नुपर्छ।
पनि कफी, कालो चिया, रेड वाइन, बेसार, ऐंसेलु रस, प्रयोग गरिरहेका प्रयास रातो बन्दागोभी, ब्लूबेरी र cranberries।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, अन्डा लागि प्राकृतिक रंजक प्रयोग, तपाईंले आफ्नो तालिका सजिलो संग छुट्टी लागि सजाउनु गर्न सक्नुहुन्छ।
सामन कसरी अचार गर्न। एक सबै भन्दा राम्रो appetizers को
Achma पनीर: व्यञ्जनहरु
प्रकाश मेयोनेज: एक फोटो सहितको नुस्खा
"नियो-गुण Penotran": analogues, निर्देशन, समीक्षा। मोमबत्ती "नियो-Penotran गुण"
मान्छे कठिन काम तपाईंले तिनीहरूको अगाडि अरूको प्रशंसा गर्दा?
दल रेस्टुरेन्ट "Obzhorny नम्बर", मास्को: समीक्षा र फोटो
अधिकार र शक्ति को एकता रूपमा राज्य को मुख्य विशेषताहरु: इतिहास को अवधारणा को प्रमुख कोसेढुङ्गामा
ताल Bashkiria - तस्बिर, समीक्षा
पृथ्वीको वातावरण: को उपस्थिति र संरचना को इतिहास
Citroen C4 ग्रैंड पिकासो - शहरी minivan
द्वितीय विश्वयुद्धको उत्पत्ति। यूएसएसआर को जेनल